Wararka Maanta: Arbaco, Mar 7 , 2018-Dhalinyaro laga soo celiyay dalka Libya oo maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho
Arbaco, Maarso, 07, 2018 (HOL)-Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu soo dhaweeyay ilaa 13 dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo laga soo celiyay dalka Libya, waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka.
Wariye Ilyas Axmed Guute oo tagay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ayaa sheegay in dhalinyaradan oo gaarayay 13 dhamaantood ahaayeen rag laga soo dayay qaar ka mid ah xabsiyada ku yaala dalka Libya.
Dowlada Soomaaliya ayaa balanqaday in iyada oo kaashaneysa Hay’adda IOM ilaa meesha ugu danbeysa ka shaqeyn doonta sidii dhalinyarada Soomaaliyeed dib loogu soo celin lahaa dalkooda Hooyo.
Dhalinyaradan maanta dalka dib loogu soo celiyay sheegay in dhibaatooyin kala duwan ku muteen muddadii ay ku sugnaayeen dalkaasi Libya, iyaga oo uga mahad celiyay dowladda Soomaaliya dadaalka ay u gashay sidii dib loogu soo celin lahaa.
Ma’aha maxaabiistii ugu horeysay ee laga soo celiyo dalkaasi Libya, sido Labo cisho ka hor ayeey aheyd markii dowladda federaalka dib dalka ugu soo celisay maxaabiis muddo ka badan 7 sano ku xirnaa dalka India.